Wadaxaajoodkii AMISOM ay waday oo xalay ku soo dhamaaday guuldarro – Madal Furan
Hoy > Warka > Wadaxaajoodkii AMISOM ay waday oo xalay ku soo dhamaaday guuldarro
Wadaxaajoodkii AMISOM ay waday oo xalay ku soo dhamaaday guuldarro
Muqdisho (Madal Furan) – Wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna Madaxa AMISOM Amb. Fransico Madiera ayaa la sheegay inuu xalay kulamo gooni gooni ah la yeeshay Madaxweyne Farmaajo, Raysal Wasaare Kheyre, Guddoomiye Jawaawi iyo dhamaan madaxda Soomaalida ee ku muransan xiisadda siyaasadeed ee xiligan ka dhex jirta Xildhibaanadda Baarlamaanka Soomaaliya.
Amb. Fransico Madiera ayaa la sheegay in dadaalkii uu ugu jiray in meel dhexe la isugu keeno aragtiyaha ay ku kala qaybsan yihiin Xildhibaanadda Baarlamaanka Soomaaliya, balse kulamadaas ayaa la caddeeyey inay ku soo dhamaadeen guudarro.
Maanta oo Arbaco ah ayaa xarunta Baarlamaanka DFS lagu arkayaa Xildhibaanadda kala taageersan Guddoomiyaha iyo Guddoomiye ku xigeenka 1-aad oo ku sii qulqulaya xarunta gudaheeda.
Inkasta oo aad loo adkeeyey amaanka xarunta Baarlamaanka iyo dhamaan jidadka soo gala ayaan misana waxaa cabsi laga qabaa in Xildhibaanadu ay gacan isula tagaan marka ay ku heshiin waayaan ajandayaasha iska soo horjeeda ee ay kala wataan Guddoomiye Jawaari iyo Guddoomiye Muudeey.
Wixii ka soo kordha Isha ku hay Madal Furan.com
Aqalka Sare oo isku mari la’ ansixinta Xeerka ay Aqalka Hoose soo ansixiyeen